नेपाल आइडलबाट बाहिरिए सुरज, यस्तो छ उनको सांगीतिक यात्रा - विवेचना
नेपाल आइडलबाट बाहिरिए सुरज, यस्तो छ उनको सांगीतिक यात्रा
August 18, 2017 610 Views
नेपालमै पहिलो पटक अन्तराष्ट्रियस्तरको रियालिटी शो नेपाल आइडलको टप ६ बाट सुरज थापा बाहिरिएका छन् । एपी वान टेलिभिजनबाट प्रसारण भइरहेको नेपाल गायन प्रतिस्पर्धा नेपाल आइडलको गाला राउण्ड अन्तर्गतकी प्रतिस्पर्धी सुरज थापा कम भोटका आधारमा टप ५ मा पर्न सकेनन् । यस साता कम भोट पाएर बटम लाइनमा परेका मध्ये सुजाता पाण्डे, निशान भट्टराई र सुरज थापा मध्ये सुरज आउट भएका हुन् । अब टप ५ मा बुद्ध लामा, निशान भट्टराई, सुजाता पाण्डे, प्रताप दास र सागर आलेले आइडलको यात्रामा छन् ।
सुरजको सांगीतिक यात्रा
दैलेख जिल्लाबाट, नेपालगन्जको चिसापानी हुँदै काठमाडौंमा नेपाल आइडलको मञ्चमा उक्लिए सुरज | घरको माहिलो छोरो। गीत संगीतमा सानैदेखि रुचि। स्कूल पढ्दादेखि नै उनले गीत गाउने, आफू पनि रमाउने अनि अरुलाई पनि मनोरञ्जन दिने। तर रेडियो, टिभीमा सुनेको भरमा गीत, संगीत सिक्न कहाँ सहज थियो र? गाउँमा भाका हाल्दै गाउनुले कहाँ पुग्थ्यो र गायक बन्न।
गायक बन्ने यस्तो हुटहुटी सवार भयो कि उनी २०६० सालमा भागेर काठमाडौं आए। सायद छोरोले गरेको रहर पूरा गरिदिने पक्षमा थिएनन् बुबा। भाग्नु उनको बाध्यता बन्यो। त्यसैले एसएलसी लगत्तै आमाको आडमा गायक बन्न राजधानी हान्निएका थापा आर आर कलेजमा भर्ना भए।
‘घरबाट भाग्दा बुवालाई थाहा नदिई आमाले लुकाएर दिनु भएको थोरै पैसा थियो। तर त्यति पैसाले के गर्न पुग्थ्यो र? त्यतिखेर भोगें काठमाडौं कति महङ्गो छ भन्ने’, अभावको अनुभव यसरी सुनाउँछन् उनी।
सुरज काठमाडौं त आए तर यहाँको परिवेश र यहाँको रहन-सहन आफ्नो क्षमताभन्दा फरक र माथि भएको महसुस गरेको बताउँछन्।
‘संगीतमा लाग्ने सपना बोकेर घरबाट भागेका पढ्नसमेत पैसा पुगेन’, केही नोस्ट्याल्जिक हुँदै भन्छन्,’संगीत यात्रा सहज हुने त झन् कुरै भएन।’ कोठा भाडा समेत तिर्न नसक्ने अवस्था सिर्जना भएपछि उनले कहिले कपडा पसलमा भुईं र सिसा पुछे त कहिले झोलाभरी स्याम्पु र क्रिम बोकेर दुनियाँको घर-घर मार्केटिङ गर्न हिडे।
भने, ‘त्यतिमात्र होइन, कहिले त रिक्सामा चाउचाउ र चिप्स बोकेर पसल-पसल धाएँ।’
काठमाडौंमा कोही आफन्त भएको भए सायद उनलाई सहज हुन्थ्यो होला। तर उनलाई आर्थिक त परको कुरो भावनात्मक साथ र सहयोग गर्ने पनि कोही भएनन्। भागेर काठमाडौं आएका उनका लागि हारेर नेपालगञ्ज फर्कनु स्वीकार्य थिएन। जसो तसो इन्टरसम्मको अध्ययन सके। तर, त्यसपछि उनलाई कमजोर आर्थिक अवस्थाले पढ्न दिएन। पढ्दै संगीत सिक्नु उनको लागि सपनामात्र थियो।
दु:खले रहरलाई मार्न कहाँ सक्थ्यो र? उनले संघर्षको भूमरीबीच पनि आफ्नो संगीत मोह भने छोडेनन्। विभिन्न एफएमहरुमा हुने साङ्गीतिक प्रतियोगितामा उनी भाग लिन्थे। आरुबारीस्थित एचबिसी एफएमले आयोजना गरेको प्रतियोगितामा पुरस्कार हात पारे। पुरस्कार थियो १ बर्ष संगीत सिक्ने मौका। सुरजको गुरु रहे लाक्पा शेर्पा। संयोग, उनलाई गुरु लाक्पा शेर्पाले दोहोरी साँझामा हार्मोनियम बजाउने काम लगाइदिए। उनका लागि त्यो काम संगीत प्रशिक्षणको मौका थियो साथै कमाउने बाटो पनि। बिस्तारै बाटाहरु फराकिलो बन्दै गए। गजल अनि क्यासिनोहरुमा पनि उनले गाउन सुरु गरे।
सिक्दैगर्दाको त्यो समयमा उनका अग्रजहरु रुपम, रुपेश, आरती र विकाससँगको साथ र प्रोत्सहान पाए। भने, ‘संघर्ष गरिरहेको मेरो लागि यी नामहरुले गरेको सहयोग बिर्सन नसकिने छ।’
सोही क्रममा उनको भेट तबला बादक केशव खड्कासँग भयो। जुन भेट उनको संगीत यात्राको ‘टर्निङ पोइन्ट’ बन्यो। केशव खड्काले उनलाई सल्लाह दिए -ब्यान्ड स्थापना गर्ने। सुरजले त्यसै गरे। र, स्थापना भयो- सुत्र ब्यान्ड।
ब्यान्ड स्थापनाले सुरज र उनको ब्यान्डलाई काठमाडौं र मोफसलको सांगीतिक यात्रामा निकाल्यो। ती प्रस्तुतीहरुबाट उनले पैसा र स्रोता कमाए। सुरजको संगीत यात्रा अलिक सहज बन्न थाल्यो। त्यो कमाइले उनलाई हौसला दियो। र उनले आफ्नो पहिलो साङ्गीतिक एल्बम ‘क्रन्दन’ सार्वजनिक गरे।
एल्बममा समावेश ‘बहुला हुँ म बहुला’ चर्चामा रह्यो। चर्चामा रहनुको मतलव एल्बम बिक्नु कहाँ हो र? सिडीले राम्रो व्यापार गर्न नसकेपछि उनले खर्च उठाउन पनि सकेनन्। केही उपाय नै बाँकी रहेन। उनी पलायन भए। १ बर्ष बहराइन बसेर पैसाको लागि संघर्ष गरे। र फर्किए। संगीत उनलाई प्यारो थियो। मोह छुटेको थियो भने सायद आज उनलाई नेपाल आइडलको मञ्चमा देख्न सम्भव थिएन।
नेपाल आइडल उनको लागि पहिलो प्रतियोगिता भने होइन। तिम्रो सुर मेरो गीत, बागिना, नेपाल स्टार, नेपाली तारा २, ईण्डियन आइडल ९ को तेस्रो राउन्डसम्म उनले आफैलाई गुञ्जाए। ‘ती प्रतियोगिताहरुमा आफैलाई सुनाउन पाउनु नै मेरो लागि जित थियो।’
छोरा लाहुरे बनोस् भन्ने बुवाको सपनालाई गाउँमै छोडेर भागेका उनी अहिले नेपाल आइडलको उत्कृष्ट ११ मा पर्न सफल भएका छन्। ‘बुबा त अझै खुसी हुनुन्न। खोइ किन हो उहाँले संगीत क्षेत्रलाई स्वीकार्न नै सक्नु भएन’, उनी केही दुखी हुन्छन्। आमाको भने सधैं हौसला र साथ पाएका छन्। ‘मेरो जीवनको लक्ष्य नै संगीत थियो, कसरी लाहुरे बन्न सक्थें र?’ उनी केही मलिन हुन्छन्। उनलाई एउटै कुराको पिरलो रहेछ, संगीतमा लागेर घरको लागि केही गर्न नसक्नु।
१२ वर्ष उनले निकै मेहनत गरे। सबै उनको संगीत मोहको लागि थियो। भन्छन्,’गाउँमा पहिले सबैका घर कच्ची थिए। माटो र ढुङ्गाले बनेका सबैका घर पक्की बनिसके। मेरो घर अझै उस्तै छ कच्ची माटोले बनेको, मैले केही गर्न सकेको छैन।’
उनको सपना हो बाआमालाई पक्की छतमुनि राख्ने। केही आत्मविश्वासी बन्दै भन्छन्,’संगीतमा लागेरै त्यो घरलाई पक्की बनाउँछु।’
नेपाल आइडलमा सहभागी भएपछि सुरज थापाको चर्चा चुलिएको छ। एल्बम सार्वजनिक गरेको मान्छे पुन: प्रतियोगितामा भाग लिनु सामान्‍य सुनिँदैन। धेरैले सोही विषयलाई लिएर प्रश्न पनि गरे। भन्छन्,’संगीत तपस्या हो र यो जति गरेपनि सकिँदैन। एल्बम निकाल्नु गायन क्षेत्रको अन्तिम बिन्दु होइन। मैले सिक्नु धेरै छ। गर्नु धेरै छ। लाग्छ मेरो गायनकलामा निखार ल्याउन नेपाल आइडलको मञ्च आवश्यक छ।’
सालीन र भद्र स्वभावका सुरज क्लासिकल र सुफी गीतहरुमा वढी रुचाइएका छन्।
Previous कनकाईमा फुटबल, वडा नम्बर ४ र ५ फाइनलमा
Next हुलाकीको साइकल